Taliyaha haayada nabadsugida NISA ee DFS oo 1,500 oo ciidamo ah shaqada ka cayriyay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTaliyaha haayada nabadsugida NISA ee DFS oo 1,500 oo ciidamo ah shaqada ka cayriyay
October 2, 2016 Abdi Omar Bile Somalia 0
Taliyaha haayada NISA Janaraal Cabdulaahi Gaafow. [Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Taliyaha ciidamada nabadsugida dowlada federaalka Soomaaliya ee NISA ayaa maanta oo Axad ah shaqadii ka cayriyay 1,500 oo ciidamo ah, iyadoo isku shaandayn cusub lagu samaynayo haayada nabadsugida iyadoo ay kooxda Al-Shabaab weeraro ka wadaan caasimada Muqdisho.
Taliyaha haayada NISA Janaraal Cabdulaahi Gaafow ayaa sheegay in ciidamada loo cayrshay xirfad xumo.
Arrintan ayaa timid iyadoo weerar isbiimayn ahaa ay kooxda Al-Shabaab shalay oo Sabti ahayd la beegsatay meel u dhow xabsi kuyaala Muqdisho oo ay maamusho haayada NISA, weerarkaas oo lagu dilay afar qof.
Janaraal Gaafow oo ahaa agaasimihii hore ee laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa si rasmiya loogu doortay agaasimaha haayada NISA bishii June ee 2016.
August 9, 2016 Shirka madasha qaran ee u dhaxeeya hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya oo lasoo gabagabeeyay
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s political leaders meeting also called the national leadership forum (NLF) is expected to open in the capital Mogadishu on Monday, according to the Somali president. Regional leaders from Puntland, Jubaland, South West [...]